Tababar Loo Qabtay Qaar Kamid Ah Macalimiinta Deegaanka - Cakaara News
Tababar Loo Qabtay Qaar Kamid Ah Macalimiinta Deegaanka
jigjiga(Cakaaranews)Isniin 12ka December 2016. Tababar uu soo agaasimay xafiiska waxbarashada DDSI islamarkaana loo qabtay qaarkamid ah macalimiinta dugsiyada degmooyinka iyo maamul magaalooyinka deegaanka oo tiradoodu dhantahay 100 xubnood ayaa lagu soo gabagabeeyay hoolka shirarka ee xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta DDSI.
Hadaba, tababarkan oo socday mudo 7 maalmood ah ayaa waxaa xidhitaankiisii kahadlay Wasiirka Xafiiska Waxbarashada DDSI mudane Ibarahim Aadan Mahad oo sheegay in tababarkan ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa garaadka aqoomeed ee macalimiinta dugsiyada hoose islamarkaana kor loogu qaadilahaa tayada ardayda. Wuxuuna intaa kudaray wasiirku in tababarkani yahay mid larabo in kor loogu qaado tayada aradayda. Wuxuuna xusay in macalimiinta looga baahan yahay in sifiican ukala ogaadaan ardaydoodu heerka aqoonta ay kala leeyihiin. Islamarkaana ay yaashaan kuwo kor uqaadi kara heerka aqoonta aradyda liidata.
Sidookale, wasiirka ayaa kubooriyay macalimiintii tababarka qaadanaysay in tababarkan ay qaateen ay sifiican uga dhaqan galiyaan dugsiyadii iyo goobihii ay ka kala yimaadeen.
Ugudanbayna dhankooda macalimiintii tababarka qaadatay oo dareenkooda kahadlay ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanayihiin tababarkan ay qaateen islamarkaana ay kafaaiideen casharo muhiim u ah. Waxayna balan qaadeen inay kadhaqan galinayaan dugsiyadii ay kayimaadeen